Holland: Murashaxiinta Beddelaya Hiddink iyo Haldoorkoodii Oo Soo Ruqaansaday
HomeWararka MaantaHolland: Murashaxiinta Beddelaya Hiddink iyo Haldoorkoodii Oo Soo Ruqaansaday
Xulka qaranka wadanka Netherlands waxa uu ku jiraa khatar uu kaga hadi karo tartanka qaramada qaaradda Yurub ee Euro 2016 oo ka dhici doona wadanka France, iyadoo tababare Guus Hiddink uu shaki la’aan qarka u saaran yahay in uu shaqadiisa waayo.
Guus Hiddink oo xilka kala wareegay Louis van Gaal ayaa hoggaamiyey xulka dalkaas 7 ciyaarood, waxana uu guuleystay laba ciyaarood oo kaliya.
Xulka Holland oo ay ka go’an tahay in uu u soo baxo Euro 2016 ayaa lix dhibcood ka hoosaysa kooxda Czech Republic oo hoggaanka u haysa groupkooda, waxa kale
oo ay 5 dhibcood ka hoosaysaa Iceland oo kaalinta labaad ku jirta.
Warbaahinta dalka Holland iyo Taageereyaasha kubadda cagta ayaa Isniintii u soo jeediyey xidhiidhka kubadda cagta dalkaas ee marka magaciisa la soo gaabiyo loo yaqaano KNVB in ay shaqada ka caydhiyaan kadib markii Sabtidii ay barbar dhac wakhti daayacii ah la galeen Turkey.
Dadka ciyaaraha faalleeya ayaa ku doodaya in xalka ugu habboon ee la gudboon dalkaas in ay tahay in ay shaqada ka eryaan tababaraha, waxana markiiba soo baxay warar sheegaya in la magacaabi doono Danny Blind oo u hoggaamin doona tartanka Euro 2016 iyo ciyaaraha isreeb-reebka.
Waxa jira rag kale oo la saadaalinayo in ay la wareegaan xilka dalkaas, waxaana ka mid ah:
Danny Blind: Waa shakhsiga koowaad ee lala xidhiidhinayo shaqadaas, waxaana 53 jirkan uu shaki la’aan noqonayaa murashaxa koowaad. Danny Blind khibrad badan oo tababare ma laha, kaliya waxa uu xilka tababare hayay 422 maalmood oo uu hoggaamiyey kooxdiisii hore ee Ajax, laakiin waxa uu agaasimaha ciyaaraha ka soo noqday kooxaha Sparta iyo Ajax. Sidoo kale, waxa uu kaaliye tababare u noqday Amsterdammers ka hor intii ku biirin shaqaalaha xulka qaranka sannadkii 2012.
Koeman: waxa uu ku jiraa liiska kama dambaysta ah ee xidhiidhka KNVB, waxaana markii horeba la saadaalinayey in isaga la magacaabi doono markii uu Louis van Gaal xilkaas ka degay kadib koobkii adduunka laakiin xidhiidhka ayaa markaas door-biday Guus Hiddink. Koeman oo markii uu ciyaartoyga ahaa difaaca uga ciyaari jiray Barcelona, waxa uu hadda tababare u yahay Southampton, taas oo haddii ay fasaxdo laga yaabo in xidhiidhku uu si toos ah ugu magacaabo.
Frank de Boer: Waa tababaraha hadda ee Ajax, sannado yar oo uu xilka tababaraha koowaad ahaana waxa uu muujiyey in uu yahay shakhsiyad tababare wanaagsan ah, kaas oo mustaqbalka dhow ka mid noqon doona ragga ugu wanaagsan adduunka. Der Boer waxa uu ahaa tababare ku-xigeenkii xulka qaranka ee koobkii adduunka ee lagu qabtay Koonfur Afrika sannadkii 2010.
Frank Rijkaard: xiddigan hore ee AC Milan wax shaqo ah muu haynin tan iyo markii uu iska casilay tababaraha xulka qaranka ee Sucuudi Carabia sannadkii 2013, balse waxa la sheegayaa in inkasta oo aanu shaqo haynin uu haddana doonayo in uu yara nasto oo aanu ku degdegin shaqo cusub. Taariikhdiisa tababarenimo ee xulka dalkiisa way fiican tahay, sannadihii 1998-2000 waxa uu Holland ku hoggaamiyey in ay gaadho Semi-finalka Euro 2000. 52 jirkan waxa kale oo uu guulo ka gaadhay wakhtigii uu Barcelona tababaraha u ahaa, waxa kale oo dhab ah in wakhtigii uu ciyaartoyga ahaana uu guulo badan u horseeday.
Clarence Seedorf: Khibrad badan ma laha, lamana filayo in uu noqdo ragga hore ee markaaba la soo dhigo, hase yeeshee intii uu joogay AC Milan ee uu tababaraha ka ahaa oo ku sinnayd dhawr bilood, waxa uu sameeyey wax layaab lagu tilmaamay. Kooxdaas oo meel hoose ku jirtay ayuu keenay meel wanaagsan hase yeeshee xilka waa laga eryey isagoo dhisanaya koox uu ku tartami karo. 38 jirkan ixtiraam badan ayuu ka haystaa qof kasta oo ku jira xulka qarankaas ama xidhiidhkaba, maadaama uu ahaa rukunno in badan khadka dhexe u taagnaa xulka dalkiisa isla markaana ay ku taami jireen taageereyaashu in uu isagu xidhan yahay funaanadda dalkiisa.
Xulka England Oo Tabobbar Milatari La Qaatay Ciidanka Kamaandoosta Ingiriiska